विमलेन्द्र निधिलाई सभापतिमा दिल्लीले उचालेकै हो ? के भन्छन् ? कांग्रेस नेता डा.सिंह (अन्तर्वार्ता) - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७७ भदौ ४ गते ९:०७
डा.अमरेशकुमार सिंह, नेता, नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनले नेताहरूलाई छोइसकेको छ । नेताहरूबीच एकले अर्कालाई आलोचना गर्नेदेखि खुइल्याउनेसम्मका कार्य गर्न थालेका छन् । महाधिवेशन शुरु भइसकेको अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागहरू गठन र विस्तार गरेका छन् । देउवाले धमाधम आफ्ना मान्छेहरू मनोनीत गरेका छन् । सभापतिमा पनि ४–५ जना आकंक्षी देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने जनाइसकेका छन् । निधिलाई भारतले उचालेर सभापति बनाएको चर्चा कांग्रेसभित्र शुरु भएको छ । यी र यस्तै विषयमा प्रतिनिधि सभाका सांसद एवम् कांग्रेसका युवा नेता डा.अमरेशकुमार सिंहसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीद्वारा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –